February | 2019 | HimiloNetwork
Himilo February 28, 2019	Leave a comment 373 Views
MUQDISHO (HN) — 29-jir u dhashay Shiinaha oo ka shaqeeya shirkad caymis ayaa helay xal fudud oo uu kaga adkaan karo ciriiriga ka jira waddooyinka iyo waqtiga badan ee kaga baxa socdaalkiisa shaqada. Liu Fucao wuxuu ka shaqeeya degmo ka baxsan degaankiisa rasmi ah oo uu subax walba kasoo jarmaado. Balse labada degmo waxaa dhex mara webiga Yangtze oo ah ...
Himilo February 28, 2019	Leave a comment 623 Views
Hooyo – si uusan uga gaajoon inankeeda oo qabatimay game-ka – cunnada ugu geysa goobtiisa.
Himilo February 28, 2019	Leave a comment 286 Views
MANILA (HN) — Muuqaal fiidiyow ah oo ku baahay baraha bulshada Filibiin oo hooyo ay maalin walba cuno ugu qaado wiilkeeda 13-jirka ah kaas oo diiday inuu kasoo tago goob lagu ciyaaro fiidiyow game uu dul fadhiyay muddo 48 saacadood ah ayaa noqday midka ugu hadal heynta badan. 37-jirta Lilybeth Marvel oo ah hooyada dhashay Carlito waxay dareentay is-beddelka inankeeda ...
Masjid London oo Qeyb ka ah Ol’olaha Nadaafadda.
Himilo February 26, 2019	Leave a comment 286 Views
LONDON – Qeyb kamid ah Mashruuca Soo Booqo Masjidkayga’ oo ay hoggaaminayaan Muslim Council of Britain (MCB), samafalayaal ka socda England, Wales, Scotland, iyo Northern Ireland ayaa taageeraya ol’ole lagu nadiifinayo waddooyinka caasimadda. Ol’olaha waxaa iska kaashanaya Keep Britain Tidy. “Meel walba oo aad kasoo jeedo iyo wax walba oo aad aaminsan tahayba, muhiimaddu waa degaanka lagu ilaaliyo nadiifsanaan,” ayuu ...
Himilo February 26, 2019	Leave a comment 396 Views
MUQDISHO (HN) – Ku dhawaad toban tallaab marka horay looga sii dhaqaaqo Is-goyska Bakaaraha, waxaa iiga muuqda tiro lo’ ah oo aan qiyaastii ka yareyn 30 neef, kuwaas oo marsha-biyeediga dhexe ee laamiga ku cunaya harharka cunnooyin la nacay oo ay ka heleen haweenka qudaarta ku iibiya labada dhinca ee laamiga. Waa xilli galab ah. Waxaana waddada ka jira ciriiri ...
Himilo February 23, 2019	Leave a comment 3,252 Views
MUQDISHO (HN) — Ku dhiirrashada ah inaad dareenka jaceyl ee laabta lulaya aad u sheegato qofka aad gaclootay ma ahan arrin sahlan. Mana ahan mid saadaal geli karta natiijada ka danbeysa. Dad badanse gidaarka ugu weyn ee wali heysta ma ahan natiijada, waa sida ay ugu sheegan lahaayeen waxa ugu dhibka badan. Hayeeshe, gudaha Japan waxaa jirta hal shirkad oo ...
Himilo February 23, 2019	Leave a comment 345 Views
WASHINGTON (HN) — In yar kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxtimada Maraykanka ee sannadka 2021, Senator Bernie Sanders ayaa Faiz Shakir u magacaabay isku-duwaha ol’olihiisa doorashada madaxtinimada America. Shakir oo kasoo aflaxay Jaamacadda Havard ayaa dhowr shaqooyinka qaran iyo kuwa uu isagu aas-aasayba kasoo qabtay gudaha Maraykanka. Wuxuu mar hormuud u noqday ol’ole looga soo horjeeday ...
Himilo February 23, 2019	Leave a comment 310 Views
MUQDISHO (HN) — Mikiile ey ayaa loola cararay isbitaalka kaddib markii eygiisa uu kasoo dul dhacay – kaddibna uu qoorta ka jabiyay. 67-jirkan la yiraahdo Liu wuxuu kusoo laabanayay aqalkiisa oo uu safar dheer uga maqnaa markii wax culus ay dusha uga soo dhaceen. Markaas ayaa u miir-danbeysay wuxuuna naftiisa ku arkay isaga oo ku sugan sariirta isbitaalka. Isaga oo ...
Himilo February 22, 2019	Leave a comment 367 Views
Moscow (HN) — Magaalada yar ee Belushya Guba ee Waqooyiga dalka Ruushka, waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah kaddib markii raxan Madax-kutiyo ah ay bilaabeen inay guryaha u galaan dadka degaanka – iyaga oo cunnooyin raadsanaya. Dadka degan oo tiro ahaan gaaraya 3,000 oo ruux, qaar badan ayaa cabsi la nool oo aan awoodin inay guryaha ka dhex baxaan ...
Himilo February 22, 2019	Leave a comment 238 Views
MUQDISHO (HN) — Dalka Tajikistan wuxuu u muuqda dalka kaliya ee si rasmi ah mamnuuc uga dhigay in xafladaha dhalashada lagu sameysto meel-ka-baxsan guryaha dunida oo dhan. Waxaana qoyskii lagu helo inay ku xadgudbaan sharciga lagu ciqaabayaa ganaax adag. Firusa Khafizova, oo ah xiddig caan ah ayaa noqotay qofkii ugu danbeeyey ee lagu helo ku-xadgudubka sharcigaas kaddib markii ay baar ...